10 Romantic Cities hitsidika In Alemaina | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Romantic Cities hitsidika In Alemaina
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 20/12/2019)
Eoropa no toerana tsara indrindra ho tanàna tantaram-pitiavana getaway. Na izany aza, dia toerana lehibe, ary mety te-tery izany teo. Soa ihany, be dia be ny toy momba ny Alemaina, indrindra fa ny tantaram-pitiavana sy ny zana-bohiny tanàna. Nahoana raha ny havanao amin'ny dia lavitra izy ireo dia tsy hanadino? Mba hanampy anao hanapa-kevitra izay haleha, eto dia 10 tantaram-pitiavana mba hitsidika ny tanàna any Alemaina:
Rothenburg no voalohany eo amin'ny lisitry ny Romantic Cities hitsidika In Alemaina, Tonga lafatra izy io tanàna Fairytale izay mahasarika mpitsidika an-tapitrisany maro isan-taona. Na izany aza, rehefa mitsidika, dia ho hitanao hoe nahoana izany no tena tian'ny ankizy. Naorina tamin'ny Moyen Âge fotoana, mitaona fanahy ny sary an'ohatra ny maro tantara an-tsary sy ny sarimihetsika, Rothenburg dia tanàna sy ny tanàna Romantic dia tsy hanadino.
Bamberg dia ny Alemaina tanàna fito eny an-tendrombohitra, be toy ny Rome any Italia. Ary tahaka Roma, tantaram-pitiavana ity dia feno tanàna tsara tarehy maritrano manan-tantara ary ny fomba fijeriny izay handringana anao eny an-tongotrao. Inona no more, Bamberg manana ny "Little Venice" distrika, izay manome fahafahana maka gondola mitaingina.
A Romantic City In Alemaina: Monschau
Close tany amin'ny tanànan'i Aachen, Monschau manana izany rehetra izany: tsara tarehy hevitra, ny rivotra, mankao, ny renirano, ary ny malaza lapa, sy ny olon-tiany. Inona no mahatonga azy ho tonga lafatra Romantic Cities hitsidika toerana any Alemaina ny natiora no tia ny maro tongotra lavitra lalana tao an-tendrombohitra. koa, raha ianao mitsidika ao amin'ny ririnina, ianao dia ho afaka ny hanonitra ny nentim-paharazana tsena Noely.
A Romance Tantara – Meissen
Meissen mipetraka eo ambonin'ny renirano Elbe ny, ary io no tranainy indrindra amin'ny tanàna rehetra Saxony ary A Romantic City. Ny Elbe lohasaha no mampisambotra Meissen tantaram-pitiavana toy izany antso. Na izany aza, Misy zavatra hafa hahita, toy ny tafo mena tsara tarehy izay mampahatsiahy ny Prague. koa, tia maritrano afaka mankafy trandrahana ny voninahitra Gothic katedraly tamin'ny taonjato faha-16 lapa.
Berlin ny Meissen Lamasinina
Freiberg ho Meissen Lamasinina
Cottbus ho Meissen Lamasinina
Chemnitz ho Meissen Lamasinina
Big Romantic Cities hitsidika In Alemaina: Heidelberg
Heidelberg ny toerana tonga lafatra raha te-hahatsapa ny fanahin'ny Romanticism sy mankafy ny hatsarany tanàna ity. Inona no more, dia afaka hijery ny lapa rava eo amin'ny havoana, ary maka mandehandeha eny amoron'ny ony Neckar amin'ny havanao.
Romantic Cities hitsidika In Alemaina – Freiburg
Raha mitady talaky masoandro fotoana Romantic mitady Cities hitsidika In Alemaina, mijery intsony noho Freiburg, tamin'ny lelan-malaza Black Forest. Izany akaikin'ny sisin-tanin'i Soisa, dia afaka manantena fomba fijery tsara tarehy sy mahafinaritra renirano ivelan'ny tanàna. Freiburg tanteraka mba hitsidika taona rehetra manodidina.
Ranomasina-manga rano ny Bodensee Lake sy ny Alpes Nanodidina Lindau. Eto dia afaka mankafy ny mahafinaritra hevitra, ary koa ny fanatanjahan-tena sy ny hafa ny rano sambo fitsangatsanganana, ary ny sasany Romance. koa, Lindau dia tsara tarehy eo amin'ny ririnina, indrindra rehefa mivaingana ny Bodensee.
Trier no tanàna tranainy indrindra any Alemaina, Izany dia ao amin'ny lisitry ny Romantic Cities hitsidika In Alemaina, fa mba fantatrao fotsiny fa tena akaiky an'i Luxembourg, dia nitsangana teo amoron 'ny Moselle river nandritra ny roa arivo taona. Indro misy ohatra ny hatsaran-tarehiny, Trier mirehareha maritrano romanina, ary koa ny Moyen Âge sy Gothic trano. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, tsy manam-paharoa izany mifangaro Trier mahatonga ny tena mahagaga.
Koblenz ny Trier Lamasinina
Frankfurt ny Trier Lamasinina
Mainz ny Trier Lamasinina
Stuttgart ny Trier Lamasinina
A Romantic City atao hoe: Cochem
Raha toa ianao ka handeha amin'ny renirano Cruise tany Alemaina, ho azo antoka ny ahitana Cochem tahaka ny anankiray amin'ny fiatoana. tanim-boaloboka and a breathtaking 11th century castle are the main features of this river town and a very romantic city.
Frankfurt ny Cochem Lamasinina
Bonn mba Cochem Lamasinina
Cologne mba Cochem Lamasinina
Stuttgart ny Cochem Lamasinina
Last Romantic Cities hitsidika In Alemaina – Quedlinburg
io kely Moyen Âge tanàna Azo isaina amin'ny lisitry ny Romantic Cities mba hitsidika any Alemaina, ity tanàna ity dia haka ny fofonaina izy sy ny mahafatifaty rarivato eny an-dalambe ary quaint trano. koa, tantara tia dia tia trandrahana ny tantara tsy manam-paharoa. Toy ny fialan-tsasatra Mpanjaka I Heinrich, Quedlinburg dia manan-danja tanàna.
Hanover ny Quedlinburg Lamasinina
Magdeburg ny Quedlinburg Lamasinina
Bielefeld ny Quedlinburg Lamasinina
Efa nanapa-kevitra izay Romantic tanàna An'i tany Alemaina te-haka tahaka ny manaraka getaway? Mikasa ny nankany iray amin'ireo 10 tantaram-pitiavana indrindra tanàna tany Alemaina sy Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila ara-potoana miaraka amin'ny Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Romantic Cities hitsidika In Alemaina” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fromantic-cities-visit-germany%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#germanytravel europetravel eurotrip tantaram-pitiavana romanticdestinations trainjourney tendron'ny fampiofanana Train Travel